Izingadi zase-Ecuadorian zaseGorgia zisongelwa ukufudumala kwembulunga yonke | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - Enelmar.es
I-Los izingadi zase-gorgonia ziyimvelo ebalulekile yezilwane eziningi zasolwandle, njengezinhlanzi. Kodwa-ke, njengoba iplanethi ifudumala inganyamalala ngenxa yesenzo sesikhunta se-pathogenic, ikakhulukazi kusuka ku- I-Aspergillus sydowii, okuyiyona eyinhloko ebhekene nokufa okukhulu kwabantu baseGorgia eCaribbean.
Ngokuya ngocwaningo olwenziwe ngabaphenyi be-Higher Council for Scientific Research (CSIC) futhi olushicilelwe yiphephabhuku i-PLOS One, uma izimo zezemvelo ziguquka, lesi sikhunta singabulala abantu base-gorgonia base-Ecuador, lapho okwamanje sisesimeni esifihlekile.
Kunezinhlobo eziyi-17 zezinhlobo zesikhunta ezingaba yigciwane kuma-gorgonia atholakele ogwini lwe-Ecuadorian Pacific. Zonke zingadala umonakalo omkhulu, kepha i- A. sydowii, okubangela isifo esaziwa ngokuthi i-aspergillosis, yiso esibulala kunazo zonke lezi zilwanyana ezincane.
Ngokusho komcwaningi we-CSIC uM. Mar Soler Hurtado, ovela eNational Museum of Natural Sciences, »ukutholakala kwalawa magciwane, ikakhulukazi A. sydowii, isixwayisa ngengozi engaba khona yokusinda kwesikhathi esizayo kwale miphakathi ye-benthic. Ngakho-ke, lezi zinhlobo zezifundo zibaluleke kakhulu kulezi zinhlelo zemvelo.
Isithombe - I-Cram.org
Umsebenzi, owenziwe ngabaphenyi beNational Museum of Natural Sciences kanye neRoyal Botanical Garden, usikhombisa obunye bobufakazi obuningi obukhona bokuthi izinguquko ziyenzeka ngempela esimweni sezulu nokuthi sekuyisikhathi sokuthatha izinyathelo kuyadingeka ukuvimbela izindawo ezinhle kakhulu njengezivande zaseGorgia ekunyamalaleni unomphela.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Izingadi zase-Ecuadorian zaseGorgia zisongelwa ukufudumala kwembulunga yonke